Waqtigaan la joogo, inteena badani way ogyihiin sida ugu dhakhsaha badan ee ogaanshuhu u yahay kansarka. Haweenka, helitaanka kansarka naasaha goor hore waxay si aad ah kor ugu qaadeysaa heerka badbaadada bukaanka. Mammografi shaki la’aan waa mid ka mid ah aaladaha ugu qiimaha badan baaritaanka kansarka naasaha waana in si joogto ah loo sameeyaa markay haweeneydu gaarto da ’cayiman. Bukaannada qaba arrimo halis ah qaarkood, si kastaba ha noqotee, raajada sanadlaha ah ayaa ku habboon oo si adag loogu taliyaa. Kooxda khabiirka ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waxay ku faraxsan yihiin inay ku siiyaan mammography-ga horumarsan Columbus, OH haweenka u baahan baaritaanka joogtada ah, kuwa qaba sababaha halista kansarka naasaha, kuwa leh taariikh shaqsiyadeed ama qoys kansarka naasaha, iyo kuwa kale. Waxbadan ka baro goorta iyo sababta aad ugu baahan karto jadwal mammogram-ka ah ee Bartamaha Ohio.
Waa maxay farqiga u dhexeeya baaritaanka naasaha iyo raajada naasaha?
Is-baadhitaannada, baadhitaannada naasaha ee kiliinikada, raajada naasaha, iyo MRI-ga naaska ayaa dhammaantood ah qalab muhiim u ah baaritaanka kansarka naasaha, in kasta oo mid waliba gaar yahay. Imtixaanka naasaha waxaa loola jeedaa baaritaan jireed inta naaska si muuqaal ah loo qiimeynayo oo gacanta looga garaacayo si loo ogaado burooyin, waxyaabo aan caadi ahayn, iyo isbeddelada naaska muddo ka dib. Baadhitaanka naasaha ee caafimaad waa in la sameeyaa sannad kasta inta lagu guda jiro baaritaanka dumarka bukaanka ah, halka is-baaritaannada ay tahay inay haweeneydu lafteeda si joogto ah ugu sameyso guriga. Taa bedelkeeda, raajada naasaha waa daraasad sawir raajo ah oo loo adeegsado in lagu ogaado kansarka naasaha.
Ayaa ubaahan raajada mammogram?
Marka loo eego tilmaamaha hadda jira, dumarka halista ugu badan ugu jira kansarka naasaha waa inay bilaabaan baaritaanka mammogram-ka ee joogtada ah laga bilaabo da'da 40. Hase yeeshe, haweenka leh arrimo halis gaar ah leh, oo ay ku jiraan taariikh shaqsiyadeed ama qoys oo kansarka naasaha ah, waxay u baahan karaan goor hore ama ka badan mammogram dadka kale. Intaa waxaa sii dheer, bukaanada la kulma calaamadaha jirka ee shakiga leh ama astaamaha kansarka naasaha ayaa laga yaabaa inay u baahdaan raajo mammogram si loo sii cadeeyo suurtagalnimada cudurka. Cunsurrada halista ah iyo astaamaha macnaheedu noqon karo inaad u baahan tahay raajada naasaha waxaa ka mid ah:
Taariikhda qoyska ee kansarka naasaha
Hidda-wadaha BRCA waa mid wanaagsan
Khadadka koowaad ee kansarka naasaha ama kansarka ugxansidaha
Kuus kuus ah ama calaamado / astaamo kale oo kansarka naasaha ah
Naasaha oo is beddela
Inta lagu guda jiro sanadlahaaga sifiican u booqo dhakhtarkaaga daryeelka aasaasiga ah ama dhakhtarka dumarka ee Columbus, Dublin, ama Westerville, OH, waxaa muhiim ah in laga wada hadlo wixii sababi kara halista kansarka naasaha ee laga yaabo inaad leedahay, iyo sidoo kale inaad uga digtoonaato wixii isbeddel ah ee naasahaaga ah tan iyo booqashadiinnii ugu dambeysay.
Ma u baahan tahay raajo naasaha ka hor naas-nuujinta?
Dumar badan oo tixgelinaya xubinta naasaha ayaa isweydiiya inay u baahan doonaan raajada naasaha ka hor qalliinka. Xaaladaha qaarkood, dhakhaatiirta qalliinka waxay u baahan karaan raajo naasaha ka hor naas-nuujinta, in kastoo aysan had iyo jeer ahayn. Haweenka halista u badan ee kansarka naasaha iyo kuwa ka weyn 40 jir ee aan dhowaan la saarin mammogram ayaa laga yaabaa in looga baahdo inay yeeshaan raajo mammogram ka hor inta aan lagu sameyn qalliinka xoojinta naasaha. Ka dib marka la helo qalab naaska laga beddelo, bukaanku waa inay sii wataan howlahooda caadiga ah ee baaritaanka naasaha, oo ay ku jiraan is-baaritaan joogto ah, baaritaanno caafimaad, iyo raajada naasaha sida lagu taliyay.
Ku ilaali caafimaadkaaga adoo ogaanaya goorta lagaa qaadayo raajada mammogram Columbus, OH
Waxbarashada iyo baaritaanka, haweenku waxay si weyn kor ugu qaadi karaan fursadahooda ogaanshaha kansarka naasaha hore iyo daaweynta guuleysta. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato waxyaabahaaga halista ah ee kansarka naasaha iyo goorta aad u baahan tahay inaad bilowdo inaad yeelato raajada naasaha oo joogto ah, wac kooxda daryeelka ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ee Columbus, OH si aad u qorsheysato la-tashigaaga maanta.
Goobta Columbus Daryeelka Dumarka Fiican Mammografi